iholide kwidolophana yaseRashiya - I-Airbnb
iholide kwidolophana yaseRashiya
Isakhiwo senkonzo sinombuki zindwendwe onguJuliane
Ababasebenzisi beendawo zokuhlala zeholide abavumelekanga ukwamkela abantu ngeenjongo zabakhenkethi.
Kude kuphinde kuvulwe, hlala usempilweni!
(Siyakwamkela kwi-german yasempuma, i-rustic, i-loft adventure kwicawa endala engenanto yaseBriest. Uza kufumana ukhenketho lwasezilalini, ujolise ekuthatheni inxaxheba kwindlela yokuphila yasemaphandleni. Yiba yinxalenye ye-ecotourism. I-Buen Camino!)
se-brandenburg gothic esinezakhiwo zemikhosi, ngasekupheleni kwe-18th Century, izitena ezibomvu. Ngokuqhelekileyo i-Prussian, inqaba yewotshi yase-Brandenburg kwaye ijikelezwe yigadi entle. Ime eBriest/eHavelsee yiBrandenburg ejonge umlambo iHavel, malunga neeyure eziyi-1,5 ngemoto ukusuka eBerlin. Le ndawo inobukhulu obuziiskwe mitha eziyi-180, inesilingi eziphezulu ezimalunga ne-10m, iloft yeplanga kunye nenqolobane-njengangaphakathi enamadonga amhlophe neefestile eziyi-8 ezinengqiqo.
IHavelsee - isithili iBriest kufutshane neBrandenburg, malunga ne-1.5h entshona yeBerlin.
Indawo ephantsi nge-180sqm/ca.10m ukuphakama kwesilingi/iloft yeplanga/iindonga ezimhlophe/iifestile ezirawundi/igadi enkulu.
inempompo yamanzi, ithobhi eliphathekayo, amadlelo, kunye nomthi we-okhi oneminyaka elikhulu.
elinomatshini wokwenza ikofu, izitya, itafile, ibhentshi, isitovu sokukhempisha, esinezinto zokupheka.
Kucetyiswa- kwigalari apho into yayikhe imi khona kwaye kukho oomatrasi abacocekileyo abaneengubo ezinemibalabala, okanye naphi na kwindlu oyikhethileyo.
Okwangoku akukho nxibelelwano lwe-Intanethi.
Ngaphandle kwezinto ezininzi ezenziwayo kule ndawo, kuquka ukuqubha emlanjeni iHavel, ukuhamba ngebhayisekile, ukuhamba ngeenyawo, ukuloba, i-barbecuing, ii-ice cream parlors, ukubukela iimuvi…… le ndlu ikunika iimvumi kunye neemvumi!
Kunokwenzeka ngemoto, ngetreyini, ngesikhephe, ngebhayisekile nangeempelaveki ngebhasi yesikolo iBrandenburg nombolo 5405
Isikhululo saseBrandenburg sikwiikhilomitha eziyi-14.
Ukuqesha ibhayisekile eKirchmöser kukwiikhilomitha eziyi-10.
I-Berlin Alexanderplatz/ Isikhululo esiphakathi - I-Brandenburg Hbf:
unxibelelwano olungqalileyo ngoTreyini (malunga nemizuzu eyi- /c.a. € 6)
1 ibhedi elala abantu ababini, ibhedi elala umntu omnye eyi-1, isofa ekwayibhedi eyi-1, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1, Iibhedi ekuthiwa zii-hammock eziyi-2
4.83 · Izimvo eziyi-214
Kukho iindawo ezinentlabathi, kodwa kukho neendawo ezinamanzi neendawo zokuqubha. Ezi ndawo ezinamanzi ngoku yindawo yezilwanyana ezinqabileyo kunye neentlobo zezityalo. Ungabuka le ndawo ngebhayisekile kakuhle kakhulu. Ukusuka apha iikhilomitha eziyi-9 ukuya kwi-PRITZERBE ufumana isikhephe esiya kwelinye icala lomlambo - apho uza kubuka iinkuni zakudala zothando ezinemithi emikhulu kunye neendlela ezibanzi zokuya ePLAUE kwindawo yakho apha eBriest.
Nantsi inxalenye yomjikelo weHavelland, enye yezona ndlela zintle zomlambo eJamani enobude obuziikhilomitha eziyi-350. Kwakhona imveliso eyaziwayo yale ngingqi yiHavelfisch. Ukuloba okuncinci kusafuneka apha, apho ungathenga khona intlanzi esandul 'ukutshaya ngqo kumvelisi.
Umbuki zindwendwe ngu- Juliane
ndihlala eVienna kwaye andikho kwisayithi, kodwa ndingafumaneka nanini na ngomyalezo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Havelsee